Apple ichavhura itsva yakagadziridzwa uye yakachipa Apple TV muna 2022 | Nhau dze iPhone
Ngirozi Gonzalez | 14/05/2022 10:00 | appletv, Noticias
Iyo Apple TV ndeye chigadzirwa kune iyo apuro hombe isina kutsaurira nguva yakakwana kana kuti ndizvo zvinofungwa nenhamba huru yevashandisi. Izvo zvinonyanya kushanda ndezvekuve audiovisual transmission system yakabatana neApple ecosystem yese. Nekudaro, nhasi kune dzimwe nzira dzakanakisa dzeasingasviki zana euros seChromecast kana Fire TV. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei kutengesa kusiri kukwira. Zvakadaro, Apple inogona kuvhura imwe yakachipa Apple TV ine yakawedzera compact dhizaini muhafu yechipiri ya2022 kuvandudza kukwikwidza kwayo mumusika.
Yakachipa Apple TV muhafu yechipiri ya2022 inogona kuve yechokwadi
Apple TV HD inounza iwe akanakisa anoratidza, mafirimu, mhenyu mitambo, uye kuwana kune ako aunofarira Apple masevhisi. Shandisa iyo Siri Remote (2nd chizvarwa) kudzora zvese.
Parizvino Apple inotengesa mune yayo zviri pamutemo webhusaiti el Apple TV 4K uye Apple TV HD. Yekutanga pamutengo unotanga pa199 euros uye yechipiri kubva ku159 euros. Tichienzanisa nezvimwe zvigadzirwa zvakafanana tinoona hukuru hukuru hwahunahwo. Isu tine Chromecast yemakumi manomwe euros uye iyo Moto TV yemakumi mana emaeuro. Kunyangwe mhando uye maficha angave asina kufanana, zviri pachena ndezvekuti Apple TV inodhura kupfuura vakwikwidzi vayo.
Apple TV uye HomePod ine FaceTime kamera
Muchokwadi, pane zvakatemerwa kuti Apple TV ive pasi pezana remaeuro. Zvakatoitika ne2nd uye 3rd chizvarwa Apple TV. Nekudaro, kuuya kwemamodheru matsva kwakasiya mutemo iwoyo kumashure. Asi pamwe zvese izvi zvichachinja. muongorori Ming Chi-Kuo akaburitsa tweet umo anovimbisa kuti Apple inoronga kuvhura Apple TV muhafu yechipiri ya2022.
Apple ichavhura vhezheni nyowani yeApple TV inovandudza mutengo mu2H22. Ini ndinofunga kuti zano rehukasha reApple rekubatanidza hardware, zvirimo, uye sevhisi mukati mekuderera zvichabatsira kuvhara gaka nevakwikwidzi vayo.
— Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) Dai 13, 2022
Iyi itsva Apple TV yaizovandudza chimiro nekubatanidza tekinoroji yayo yese, nekudaro ichidzikisa mutengo wezvese kugadzira uye zvigadzirwa pachazvo. pamwe ndiyo nguva yatinoona yakachipa mutengo weApple TV uye tanga kutora chigadzirwa ichi kusvika pakukwanisa kukwikwidza. Muchokwadi, chimwe chezvakasarudzika ndechekuti chigadzirwa ichi chaive neApple TV + chete. Nekudaro, iyo Big Apple chikuva inogona kutowanikwa pane mamwe emukati ma transmitters akadai seChromecast.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » appletv » Apple ichavhura itsva yakagadziridzwa uye yakachipa Apple TV muna 2022